China abụọ-injection-ịkpụzi-akụkụ Manufacturer na Supplier | Meste
Ihe abụọ injection ịkpụzi akụkụbụ ogwu ịkpụzi akụkụ sof abụọ dị iche iche ihe n'ime otu set nke ebu, ka ị ghọta akụkụ nke ụdị ihe abụọ mepụtara. Offọdụ n'ime ihe abụọ ahụ dị iche na agba, ụfọdụ dị iche na ngwaike na ngwanrọ, ka iwelie ọrụ na nzukọ nke ngwaahịa a.
Ugboro abụọ nkedo nkedo (otutu ihe eji eme ihe otutu ogwu) bu ihe di nkpa di nkpa maka akụkụ plastik. Akụkụ ọgwụ abụọ nwere ọtụtụ uru na usoro, mma, ụgwọ na uru. Ugbu a, ọ na-e ọtụtụ-eji ihe fọrọ nke nta niile plastic ubi, dị ka electronic ngwaahịa, electric ngwaọrụ, ọgwụ na ahụ ike na ngwaahịa, home ngwa, ụgbọala, ụmụaka, wdg, wdg
Ugboro abụọ ogwu handheld ikpe
Ugboro abụọ ọgwụ n'ụlọ ngwa oru akụkụ
Ugboro abụọ ogwu nkwurịta okwu ngwaahịa akụkụ
Uzo uzo abuo ugbo ala
Ugboro abụọ ọgwụ ulo oru ngwaọrụ akụkụ
Ugboro abụọ ọgwụ plastic maka ọgwụ
1.Kindsdị ihe abụọ dị n'ime akụkụ nke okpukpu abụọ nwere ezigbo encapsulation: a na-emecha ngwongwo plastik abụọ ahụ n'otu nkedo ọgwụ ahụ n'otu usoro ịgba ntụtụ na ọ dịghị mkpa iji aka ha bulie ma debe ha. E jiri ya tụnyere nsị ma ọ bụ usoro ntinye ọdịnala karịa, ọ nwere ike belata oke ntụpọ nke nhazi.
2. Ihe dị n'ime nke nkedo nkedo nkedo okpukpu abụọ: nchikota siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya, ya na ezigbo mmiri na-egosi, uzuzu na ihe mkpuchi.
3.Akụkụ okpukpu abụọ nke nkedo ogwu nwere ike ime ka ihe dị iche iche na agba ma ọ bụ ederede dị iche iche jikọta ọnụ, mee ka ngwaahịa mara mma na nke pụrụ iche, ma merie ihu ọma ndị ahịa. ga-enwekwu asọmpi n'ahịa
4.Mgbe nkedo nkedo okpukpu abụọ, ihe abụọ nwere ike dị iche iche, ederede ma ọ bụ arụmọrụ nwere ike ịmepụta akụkụ dị iche iche nke akụkụ dịka mkpa, na arụmọrụ zuru oke nwere ike nweta. Dị ka ike, mkpuchi, ijide nkasi obi na ime mgbanwe.
5. Mgbe nkedo nkedo okpukpu abụọ, ihe abụọ siri ike ijikọ site na usoro ndị ọzọ nwere ike ịbụ akụkụ zuru oke.
6. A na-eji akụkụ dị iche iche na-akpụzi akụkụ abụọ dị iche iche abanye n'otu akụkụ n'ọdịnihu iji belata ma zere nrapado na nzukọ ọzọ nke ọtụtụ akụkụ ma belata ọnụahịa.
7. Mmepụta mmepụta nke nkedo nkedo okpukpu abụọ dị mkpụmkpụ karịa nke usoro nkedo ndị ọzọ, nke dị mfe ịghọta mmepụta akpaka na arụmọrụ dị elu.
8. Na akuku ogwu ogbugba okpukpu abuo, ihe ndi puru iche na onu ahia di elu nwere ike iji mee ihe maka elu ma obu ihe ndi ozo iji nweta oru puru iche, dika mgbochi nnyonye aka nke electromagnetic, ihe omuma di elu na ihe ndi ozo iji meziwanye ngwa ahia.
9.Akụkụ abụọ nke injection nwere ike ịnwe ihe dị iche iche dịka njirimara eji eji akụkụ dị iche iche belata ihe ego. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ihe dị nro mee ihe maka elu nke ngwaahịa ahụ emechara emecha, a na-eji ihe siri ike maka isi ihe iji nweta ike, ma ọ bụ jiri rọba rọba mee ihe dị mkpa iji belata ịdị arọ nke ngwaahịa.
10. Isi ihe eji eme ihe na ogwu ogwu abuo nwere ike iji ihe di ike nke viscosity iji belata nkedo ogwu ma belata nsogbu ogwu.
11. Ugboro abụọ na-akpụzi ọgwụ na-adaba maka imeziwanye ahụ mmadụ: njikwa ma ọ bụ aka aka ejiri aka bụ nke ihe dị nro maka ijide na ịrụ ọrụ dị mfe, yabụ ihe ndị enwetara na-agbanwe agbanwe na injin mmadụ. Nke a dị mkpa karịsịa maka ngwaọrụ ahụike na ngwaahịa ndị ọzọ ejiri aka.
12. Kpụzi ọgwụ na-agba okpukpu abụọ nwere ike ijikọta polymers siri ike ma dị nro, ọbụnakwa obere ngwaahịa nwere ike inye nkasi obi magburu onwe ya na ịba uru.
Mestech bụ onye nwere kọmpụta nwere ọfụma nwere ike inyere gị aka mezue usoro ahụ niile site na echiche ruo na ngwaahịa agwụla, ma hụkwa na ị ga-eweta azịza ọnụ ahịa. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nke gara aga: Plastic drawer
Osote: Ugboro abụọ ọgwụ ike ngwá ọrụ ụlọ
Naịlọn akụkụ ogwu ịkpụzi